शब्दकोश: October 2010
जतासुकै चर्चाको एउटै तातो मफलर !
“डीभी भर्‍यौ” प्रश्‍नदेखि “यसपाली चाहिँ निशाना लाग्छ कि, भर्नुपर्‍यो फेरि'” भन्ने इच्छा जाहेरीको सिलसिला टन्नमन्न ।
“अब यहाँ नबस्ने”, अफिसमा एउटा दाइले सुस्केरा हाले । अफिसको ड्युटी टाइम सकिइसकेकोले अफिसमा धेरै नबस्ने, अब घरतिर हिँड्ने भनेका हुन् कि भनेको त, अमेरिकातिर उड्ने योजनाको खाका पो फुकाए ती दाइले । अफिसमै अर्को दाइ विरक्तिए, “यहाँ बसेर केही हुन्न, अब जाने ।” नभन्दै मेरै सामुन्नेमा आफ्नो एउटा साथीको र आफ्नो डीभी आवेदन अनलाइन मार्फत दर्ता गरे तिनले । हुन पनि सँगैका साथीले कति फड्को मारिसके, आफू कान्लामुनिको भ्यागुतामा सीमित बन्नुपरेकोमा चिन्ताको पहाड शिरसम्मै थुप्रिएको थियो ती दाइको । एउटा अफिसमा लगातार सात वर्षसम्म पसिना काढेको के फल मिल्यो, उनको गुनासोको खात छ । सायद अरूहरू धेरै जनाको पनि ।
यो समय कोही विदेशको सुनौलो अवसर उतै जिम्मा लगाएर आफ्नो देश भन्दै फर्केर आएको र कोही भने अब यसरी टिक्न सकिन्न भन्दै सपनाको मुलुकतिर हानिने तर्खरमा रहेका दुवै परिस्थितिको बराबर साक्षी बन्न पुगेको छु । आकांक्षाका तह खप्ट्याउँदै जाने हो भने पक्कै पनि हुँदै जान्छ । सम्पन्नता र जीविकाको राम्रो मेलो पैल्याउँदै विदेश गयो भने पनि घर, परिवार र देशको भावनाको भुल्काहरू मनभरि जागेर भतभती पोल्छ । यतै देशमै बसूँ र केही गरूँ त सबैलाई अवसर र काम गर्ने वातावरणको कमी छ । ‘गरी खान देऊ’ भन्ने जस्ता अभियानको चालचुल त्यत्तिकै सुरु भएको छैन । गरी खाने वातावरणको पनि अभाव छ देशभित्र । काम गर्न कुनै निजी संस्थाभित्र (सरकारीमा पनि भनसुन र ढोगभेट नचल्ने कहाँ हो र ?) अवसर पाए पनि चाप्लुसी, लोलोपोतोले ठीक्क पार्नुपर्ने गुटबन्दीको खेलमा जकडिएको हुन सक्छ सिङ्गो कार्यालय नै । सबैलाई बडप्पन र अदबका साथ सम्मान टक्र्याउनुपर्ने । सिनियर र जुनियर कर्मचारीको वर्गीय समाजको स-सानो पसल त्यहाँ स्वत: खुलेको हुन्छ । तपाईँले त्यहाँ काम गर्न सुरु गरेपछि त्यही साँचोमा नढली हुन्न । मान्यता नदिएर विद्रोह गर्‍यो भने तपाईँ एक्लो उम्मेदवार हुन के बेर !
अँ त, डीभी चिट्ठा भर्ने कुरामा भने मेरो आफ्नो कुरो अलि फरक छ । डीभी खुलेको बेलामा आवेदन हाल्ने लहर चल्दा म चाहिँ अहिलेसम्म आफूलाई पन्छाउँदै आएको छु । खै, विदेश गएर कमाइ-धमाइ गर्ने रूपमा आफू मानसिक रूपमा तयार नभएर हो वा आत्मविश्‍वासको कमीले हो, अहिलेसम्म डीभी आवेदन हालेको छैन । डीभी भर्ने कुरा चल्यो कि त हरेक वर्ष मैले यही ठट्टाले काम चलाउँदै आएँ- “डीभी भर्‍यो कि त परिहाल्ला, पर्‍यो भने जानुपर्छ, त्यही पर्छ भनेर आफू त भरिन्न । वित्थामा तनाव !” ;)
यसपाली पनि डीभी आवेदन भर्ने सरसल्लाह भयो । फेरि पनि सपनाको देश भन्ने चलनचल्तीको आकर्षणमा पुतली भएर हेलिइहाल्ने मन पलाएन ।
जे छ, ठीकठाक छ भन्ने मध्यम स्तरको सन्तोकले कतै बर्बाद त गर्दैन ?
Posted by Jotare Dhaiba at Sunday, October 31, 20104: Comments
Posted by Jotare Dhaiba at Sunday, October 24, 2010 8 : Comments
Posted by Jotare Dhaiba at Friday, October 15, 20103: Comments
विजयादशमीको हार्दिक मङ्गलमय शुभ कामना !
जो जहाँ रहनुहुन्छ, टीका लगाउने-नलगाउने जस्तो परिस्थिति भए पनि त्यसैमा खुसी हुन सक्नुहोस् । यस वर्ष कतिलाई बिदा मिलेन होला, कतिलाई पाएको बिदामा पनि के-कसरी घरसम्म पुग्ने हो भन्ने झन्झटले पिरोल्यो होला । विदेसिएकाहरूलाई देशको सिमानादेखि टाढा रहनुपर्दा अघिल्ला वर्षहरूका यादको सहारा नै रामरमाइलो गर्ने बाध्यात्मक बहाना बनिरहेको होला । मुलुकमा मौलाएको परिवर्तनको मुना जमरा जस्तै पहेंलिएर त नजाओस्, यही कामनाका साथ दसैँलाई मनाऔँ । आखिर वर्षदिनको चाड, नेपाली संस्कृतिको परिचायक मानिने दसैँमा खुसी नै हुन खोज्छौँ सुख-दु:ख जे भए पनि । यही गन्थनको साथ दसैँको बहानामा दसैँकै कविता बिसाउँछु :
ताछिएको पाखोबारी र निधार
छैन केही फरक
रोपूँला यही पाखोबारीमा
छोपूँला खिया पर्दैगएको शिर
स्वजनको आशिष्‌ले ओत देला
थामिन्छ कि अब
पलपल झोंक्किने पैँतालाको पहिरो
सरुवा भई आउँछ कि
उही पुरानो ठेगाना पैल्याउँदै
सौभाग्य नामको हल्कारो
छाडेको चिया झैँ एकदम चिसो
निभेको चुरोट झैँ ध्यानमग्न
कुनै घर होला परदेशीको पर्खाइमा
सुकेको सिट्ठा बाँस भएर
कुरेका होलान् निर्बलिया बा-आमाले
तुफान हुँदै आउनुपर्ने लालाबालालाई
भोकले दोब्रिएको पेट जस्तै
बटारिएका यी बाटाहरू पार गराउन
छैन पर्खाइ कुनै देवदूतको
दसैं आउँछ र आउँछन्
सम्झना र समस्याका भँगालोहरू एकसाथ
टीका उजाडिएको निधार खडेरीग्रस्त पाखोबारी
टीका टाँसिएको निधार -
ताराको दाग उम्रिएको बिफरग्रस्त आकाश ।
Posted by Jotare Dhaiba at Saturday, October 09, 20103: Comments
Labels: कविता, पर्व-संस्कृति
Posted by Jotare Dhaiba at Thursday, October 07, 20102: Comments
Posted by Jotare Dhaiba at Sunday, October 03, 20102: Comments